Alifka Kaa Qaloocdaa Albaqruu Ku Dhibaa’ Waxa Taa Ka Dhigan Cadaalada Ka Qaloocata Saldhigyada Bilayska Waxa Ay Ku Dhamaataa Xukunka Xaakinka Oo Qalooc Ku Soo Afjara | Marsa News
Alifka Kaa Qaloocdaa Albaqruu Ku Dhibaa’ Waxa Taa Ka Dhigan Cadaalada Ka Qaloocata Saldhigyada Bilayska Waxa Ay Ku Dhamaataa Xukunka Xaakinka Oo Qalooc Ku Soo Afjara
July 20, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Sida aynu qormadeenii hore kaga faaloonay waxa markasta mihiima oo sunaha nolosha ibni-aadamka kaw ka ah cadaalada iyo sinaanta, sidaa li ajligeed waxa mihiima inaynu is dul taagno cadaaladu waxa ay tahay.
Cadaaladu waa waxa qudha ee iinsanka kala saara laguna wada qanco islamarkaana qaofkasta deeqda, in badana quraanku uu ka hadlay.
Cadaaldu waa rukumada aasaaska nolosha bila-aadamka waana furaha koowaad ee abniga, hadaan abni jirina nololi ma jirayso ilaahay baana abniga ka horaysiiyay iimaanka, cadaaladuna waa mida qudha ee keenta abni iyo xasiloonu umadi ay ku wada noolaato, waxase taa ku lidi ah oo ka soo hor-jeeda cadaalada darada oo iyadu abniga iyo wada jirka umada labadab wiiqda, keentana colaad iyo dulmi uu ilaashay xarimay.
Sida aynu la wada socono Saldhigyada bilayska oo ah goobaha ay ka soo bilaabman kiisasku islamarkaana halka u danbaysa ee ay gaadhan tahay garsoorka ama xaakimka qaadaya dacwada uga timaada saldhigyada iyadoo soo maraysa jaran jarooyinkeedii ayaa laba mid uun noqon karta.
1.Hadii dawcada saldhigii ay ka soo bilaabantay uu soo qaloociyo islamarkaana garnaqsigii dacwadu gaadho halkii u danbaysay ee xaakinkii maxkamada joogay waxa ay natiijadeedu noqonaysaa mid ku soo gabagabowda qaloocii ay kaga timid saldhiga oo cadaalad daro ayay magansanaysaa.
2. Hadiise saldhiga dacwada uu qaadayo baadhisteedu ay si togan oo quman uga baxdo waxa ay noqonaysaa mid natiijadeedu guulaysata oo si saxa u dhacda cadaaladna magansata.
Hadab waxa iswaydiin mudan saldhigyadeenu labadaa nooc ee aynu soo sheegnay midkee ayay ku sifoobayaan?
Dabcan waxa aynu la wada soconaa in bulshada reer somaliland idil ahaanteedba waxa ugu badan ee laga cawdaa ay tahay cadaalad daro, halkay hadaba sartu ka qudhunsantay ee cadaalada daradaasi salka ku haysaa.
Waxa marag ma doona oo aynu tooshka ku qabanaynaa waaqica dhabta ah ee yaala saldhigyada bilayska somaliland oo iyagu ah halka kowaad ee dhibta iyo dulmiga cadaalad xumida u ehelka ahi ay tahay, waayo waxa badiba dhacda in baadhaha saldhigu uuna lahayn aqoontii baadhiseed ee dacwada uu gacanta ku hayo waxa kale oo u sii dheer iyana masuuliyiintii ku ilaalin lahaa oo aan laftoodu waxba dhaamin islamarkaana xiliyada qaar danooyi gaaraba dhaafsada waxa ay baadhayaan oo dhinacyada baadhistu ka dhaxayso badiba inta itaalka darani ay dhibane u noqoto cadaalad daro.
Hadii aynu iyana jaleecno dhacdooyin xiliyada qaar dhacay iyo sida ay ahaayeen
Mudo haatan laga joogo dhawr sano ayaa dhacdo naxdin badan leh ay ka dhacday xaafada ibraahin kood buur kadib markii inanyar oo jaamacada ka soo rawaxday lagu dilay mobile ay sidatay inantaas yar waxa adeer u ahaa Abwaanka wayn ee Caanka Ah Maxamed Ibraahin Warsame Hadraawi.
Waxa xusid mudan islamarkii ay dhacdadaasi dhacdayba waxa hadlay bilayska oo warbaahinta u sheegay inay soo qabteen gacan ku dhiiglayaashii dilkaa gaystay.
Nasiib daro se waxa ay soo qabqabteen inamo yaryar oo aan waxba ka ogayn islamarkaana aan ahayn danbiilayaasha ay sheegayeen, tiyoo waliba inamadaasi yaryar ay maxkamadihiina ku xukumeen danbigaa aanay qabin ee bilaysku ku soo oogay.
Mudo dabadeed ayay soo heleen dadkii dhibaatadu ku dhacday gacan ku dhiiglihii inanta yar dilay oo waliba qiraala hada waa xili ay ilaa maxkamadihii inamadii yaryaraa kiiskii ku qaadeen, Markaa kadib ayaa dhalinyaradii dulmiga ku eedaysnayd layska soo daayay iyadoo aan wax talaabo ah laga qaadin cidii ay dhibanaha u ahaayeen mudada badan.
Taasi waxa ay ku tusaysaa aqoon la’aanta bilayska dalka haysata oo waxa ay marag u tahay in dacwada bilawgeeda saldhiga ka qaloocataa ay saamayso ilaa garsooraha u danbeeya inay qaloocaasi ku dhamaato waayo ma jirto aqoon baadhiseed oo garsooraha ka caawin karta in dib u eegis madax banaan ay dacwadu hesho oo aqoonina hagayso.
Hadaba maxaa waxaas oo dhan lagaga sabato bixi karaa
Waxa dalka iyo dadkuba u baahan yahay saraakiil ciidan bilays ah oo aqoontii iyo khibradii bilaynimo leh islamarkaana dibu haybn ku samaysa dhamaan laamaha bilayska ee baadhista danbiyada sidoo kalena barta dhisbiliinkii askariga bilayska ahi uu ku kasban lahaa macaamilka bulshada maadaamo uu yahay u addeega bulshada oo aanay marnaba askariga bilayska ah iyo bulshadu kala maarmin oo askarigii uu yahay saaxiibka bulshada taasina ay keento wada shaqan fiican oo abniga guud wax wayn ka tarta.